नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीद्वारा सोनाम ल्होछार २८५४ सम्पन्न , वाईबा सम्मानित - Tamang Online
नेपाल तामाङ घेदुङ कास्कीद्वारा सोनाम ल्होछार २८५४ सम्पन्न , वाईबा सम्मानित
फाल्गुन ५ गते , पोखरा ।मन्जुश्री संवत सोनाम ल्होछार २८५४ खि-ल्हो/ निकी ल्होको उपलक्ष्यमा आयोजित शुभकामना आदान-प्रदान एवं कार्यक्रममा नेताघेका पूर्व केन्द्रीय सल्लाहकार एवं साँस्कृतिक भवन जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण समितिका संयोजक प्रताप बहादुर वाईबा सम्मानित हुनुभएको छ ।
वहाँलाई दोसल्ला ,कदर-पत्र र खदाद्वारा नेताघेका पूर्व केन्द्रीय कावा अध्यक्ष कुमबहादुर तामाङ , नेताघेका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य एवम् प्रदेश नं. -४ का अध्यक्ष दिपक वाईबा र केन्द्रीय सदस्य सु. हरीमान तामाङले सम्मान गर्नुभएको थियो । जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण बहादुर तामाङको अध्यक्षता , प्रमुख अतिथि केन्द्रीय पूर्व अध्यक्ष एवम् वर्तमान सल्लाहकार धन प्रसाद तामाङले गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण ईकाईहरुलाई प्रसंशा-पत्रद्वारा सम्मान गरिएको थियो ।
« टेक्सास, डल्लासमा तामाङ पहिचान सहित पहिलोपटक सोनाम ल्होछार सम्पन्न (Previous News)
(Next News) काजल तामाङले जितिन मिस ईकलेज २०१८ को उपाधी (फोटो सहित) »